कसरी एक पुरानो-शैली भित्री सजावट प्राप्त गर्न सजाउनुहोस्
मारिया जोस रोल्डन | | शैलीहरू
भिन्टेज शैली एक सजावटी प्रवृत्ति हो जुन हाल धेरै अनुयायीहरू छन्। यदि तपाइँ एन्टिक फर्निचर र र colorsहरू मन पराउनुहुन्छ जुन केही म्युट गरिएको छ र अत्यन्तै जटिल छैन भने, भिन्टेज शैली तपाईंको घरको लागि उपयुक्त छ।
पुरानो शब्दले कुनै चीजलाई जनाउँछ जुन विगतको समयमा सफल र लोकप्रिय थियो त्यो फेसनमा फिर्ता आयो। यो त्यस्तो चीज हो जुन बर्षौं उमेरको भए पनि शीर्ष स्थानमा छ र समयको साथ सुधार भएको छ।
1 पुरानो सजावट के हो?
2 कसरी एउटा पुरानो-शैली भित्री सजावट प्राप्त गर्न
3 पुरानो शैली संग कोठा
4 पुरानो सजावटको साथ रसोईघर
5 पुरानो सजावटका लागि सबै भन्दा उपयुक्त र colors्गहरू
पुरानो सजावट के हो?
पुरानो शैलीले घरको बिभिन्न सजावटी तत्त्वहरूलाई भव्यता दिन्छ। यस शैलीले विगतका सजावटका टुक्राहरूलाई नयाँ भाँवर दिन र निश्चित रूपमा केही क्लासिक कटको भए पनि तिनीहरूलाई अन्य आधुनिक टुक्राहरूको साथ पूर्ण रूपमा मिलाउन खोजेको छ।
पुरानो शैलीलाई रेट्रो जस्ता अर्को सजावटी शैलीसँग भ्रम नगर्नुहोस्। पुरानो अवस्थामा, furniture० वा s० को दशकबाट मूल फर्निचर कोठाको सजावटको लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि रेट्रोको मामलामा प्रयोग गरिने सामानहरू हुन् जुन विगतको सम्झना दिलाउँदछ तर त्यो आज निर्माण गरिएको छ।
त्यहाँ एउटा भिन्टेज टचको साथ निश्चित कोठामा सजाउने धेरै तरिकाहरू छन्:
यस प्रकारको सजावटी शैलीको एउटा विशेषता नयाँ वा वर्तमानलाई पुरानोसँग मिलाउनु हो। शैलीहरूको मिश्रण आदर्श हो जब यो एक शानदार भिन्टेज टच प्राप्त गर्न आउँदछ।
२० वा s० सेकेन्डका क्लासिक सामानहरू सम्मिलित गर्नुहोस् जस्तै रेडियो वा घर रेकर्डमा रेकर्ड प्लेयर तिनीहरू पुरानो दृश्य सिर्जना गर्नका लागि उत्तम छन्।
भिन्टेज फर्निचर कुञ्जी हो जब यो सुन्दर सजावटको साथ बहुमूल्य हुनको लागि आउँदछ। तालिका, सोफा वा आर्मचेयर एक राज्य चरित्र को एक भव्य वातावरण सम्झना छ कि सही जब यो पुरानो शैली को बृद्धि गर्न आउँछ।
फेब्रिक्स अन्य सामान हुन् जुन पुरानो शैलीको आधारमा सजावटमा हराउन सक्दैन। यी कपडाहरू पर्दामा वा फरक फर्निचरमा राख्न सकिन्छ जुन तपाईं प्रश्नको कोठामा हुनुहुन्छ।
पुरानो शैली संग कोठा
एउटा कोठामा भिन्टेज टच दिँदा तपाईं सुरू गर्न सक्नुहुन्छ पुरानो वस्तुहरू वा सामानहरू राख्नुहोस् जसरी फूलहरूको चित्रहरू वा एक घडी विगतमा उत्पन्न हुन्छ।
ओछ्यानमा पानाहरू र ओछ्यानका स्प्रेडहरू कल्टिल्ड हुनुपर्दछ र हल्का र in्गमा पेस्टलमा। तिनीहरूसँग फूलहरूको साथमा विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू पनि हुन सक्दछन्।
बेडसाइड टेबलहरू सामग्रीको हुनु पर्छ जस्तै गाढा वा सेतो काठ, साथै लामो र अत्यधिक चौडा नहुनु।
पुरानो सजावटको साथ रसोईघर
यस प्रकारको शैलीको एक भान्सा यो उत्तम छ जब यो आउँदछ र यसको मजा लिन्छ। यस प्रकारको सजावटमा बिभिन्न सामानहरू कुञ्जी हुन्। भान्साकोठामा पुरानो गिलास भाँडाहरूको कुनै कमी हुँदैन जहाँ दूध वा पानी भण्डार गर्न सकिन्छ। कुकीहरू वा बिहानको खाजामा भण्डार गर्नको लागि टिन जारहरू, त्यस्तै तत्वहरू पनि जुन तपाईंको विन्टेज किचनमा हराउन सक्दैन।
पुरानो भान्छाको फर्नीचरमा काठ तारा सामग्री हुनुपर्दछ। काठ जस्ता सामग्रीले यसमा क्लासिक स्पर्श ल्याउँछ र आरामदायक वातावरण सिर्जना गर्दछ। एक साधारण काठको टेबुल चौडा खुट्टाहरू र कुर्सीहरू सहित जुन पछाडि मोल्डिंगहरू पर्याप्त छन्।
एक पुरानो सजावट प्राप्त गर्न को लागी एक उत्तम विचार एक पहिरिएको लुकको साथ विभिन्न भान्साको भाँडाहरूमा झुण्डिएको हुन्छ।
पुरानो सजावटका लागि सबै भन्दा उपयुक्त र colors्गहरू
सेतो सबै भन्दा उपयुक्त रंग हो जब यो एक पुरानो सजावट को लागी आउँछ। यहाँबाट तपाईं यसलाई अन्य शेडहरूसँग मिलाउन सक्नुहुनेछ जुन लामो-प्रतीक्षित शैली प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यस सजावटी शैलीका लागि उपयुक्त अर्को र color पहेलो छ। तपाईं यसलाई कुर्सी वा सोफाको अपहोल्स्ट्रीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई अन्य रंगहरू जस्तै हल्का खैरोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ।
रंग रातो एक धेरै आकर्षक र हड्ताल हो कि पुरानो सजावट मा पनि उत्तम छ। यो र color्गको साथ ओभरबोर्डमा नजाउँनुहोस् र यसलाई हल्का हल्का रंगहरूको अर्को श्रृंखलासँग मिलाउनुहोस् जस्तो कि बेज वा सेतो। यस र colorको संयोजन बिभिन्न कोठाको पर्दामा वा कुर्सी वा आर्मचेयरहरूको अपहोल्स्ट्रीमा प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
छोटो, भिन्टेज शैली सबैभन्दा ट्रेन्डसेटिंग मध्ये एक हो जब यो आन्तरिक सजावटको आउँदछ। यस प्रकारको शैलीको साथ सफल हुन को कुञ्जी यसलाई अन्य प्रकारको सजावट जस्तै देहाती वा औद्योगिक जडानको लागि हो। बिभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस् जुन २० र s० को दशकहरू हुन् र तिनीहरूलाई तपाईं चाहानुहुन्छ घरको कोठामा राख्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » शैलीहरू » कसरी एउटा पुरानो-शैली भित्री सजावट प्राप्त गर्न
क्लोसेट ढोका, प्रेरणा खोज्नुहोस्